Denisovan। जीनोम denisovan
मानव प्रकृति, मानिस को मूल - कि पुरातन समयका देखि मान्छे के excites छ। त्यहाँ धेरै संस्करण र सिद्धान्त हो। वैज्ञानिकहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ पाउन प्रयास, अनुसन्धान सञ्चालन छन्। लेख पढेपछि तपाईं पुरातन लोप मान्छे अर्को उप सिक्न हुनेछ।
Denisovan वा denisovets मानिन्छ निकट Soloneshensky जिल्ला Altai Krai मा अस्तित्व Denisova गुफा। यो लागि प्रमाण फरक अवधि मा र गुफा विभिन्न तहहरू पाइएको थियो।
क्षणमा, यो, पाँच मात्र टुक्रा फेला denisovan कुरा गर्न अनुमति दिन्छ। तर, यी ट्रयाक हालसम्म छैन पूर्ण यसको उपस्थिति पुनर्स्थापना पर्याप्त छ। तथापि, तर्क गर्न पर्याप्त पाइने टुकडे कि मानिसको रहलपहल होमो Sapiens को रहलपहल फरक, साथै एक Neanderthal को रहनेछ।
यो गुफा लोकप्रिय पुरातात्विक सम्झाउने, जो Altai को घमण्ड गर्न सकिन्छ। Denisovan Biisk शहर देखि 250 किलोमिटर, यहाँ बस्थे। यो गुफा एकदम ठूलो छ, 270 m² को क्षेत्र।
यो बस्तियों नजिकै स्थित छ पर्यटक ठूलो संख्या आकर्षित जो तेर्सो प्रकार, पर्छ। तर, यहाँ पनि त्यहाँ अझै पनि एक परिणाम गर्न नेतृत्व जो archaeologists मेहनत छन्।
जसको उमेर गुफा, तल्लो पत्रहरु मा अध्ययन को परिणाम अनुसार पत्थर उपकरण र गहने उहाँले पनि Denisovskoe नाम जसलाई प्राचीन मानिस, को निशान रूपमा साथै, फेला परेन, 120 हजार वर्ष छ।
Fragments रहलपहल denisovan
सोभियत राज्य अस्तित्व समयमा तीन molars मानव दाँत उचित भन्दा अधिक आकार मा फेला परेन। परीक्षा अनुसार, तिनीहरूले एक युवा उमेर एक पुरुष व्यक्तिगत गर्न belonged। साथै, एक खण्ड phalanx फेला परेन तत्व को विश्लेषण अहिलेसम्म बाहिर छ।
हड्डी phalanx बच्चा औंला - एक पछि अवधि मा, 2008 मा फेला परेन अर्को तत्व छ।
एक phalanx denisovan फेला fragments विकासवादी शास्त्र वैज्ञानिकहरू लागि लिपजिग संस्थान को टोली अध्ययन गरिएको। अध्ययन mitochondrial डीएनए 385 nucleotide मा होमो Sapiens को mitochondrial डीएनए फरक denisovan कि देखाए। यो Neanderthal जीनोम होमो Sapiens 202 nucleotides को जीनोम भिन्न कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
Denisovan अझ राम्ररी भन्दा उचित व्यक्ति Neanderthals सम्बन्धित। पनि टिप्पण लायक आफ्नो जीन को Melanesians फेला गरिएका छ, र त्यो हामीलाई Melanesians अफ्रीका बाट देखा र दक्षिण-पूर्व सार्नु गर्दा एक समयमा मानिसहरूको ठूलो पार बारेमा बोल्न अनुमति दिन्छ।
अध्ययन अनुसार, लगभग 400-800 हजार वर्ष पहिले एक उप रूपमा विभाजित denisovan। आज, Denisova गुफा टुकडे पाइने अध्ययन तपाईं धेरै आधुनिक राष्ट्रका यसको जीन पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, दक्षिण पूर्व एशिया र चीन दक्षिणी को देशहरूको बासिन्दाहरू पाइने एउटै तत्व को सबै भन्दा, तथ्यलाई बावजुद कि साइबेरिया यी प्राचीन मानिसहरूको फेला निशान।
यो पनि नाम उप लोप मान्छे, साथै Neanderthal मानिस, प्रतिरक्षा प्रणाली लागि युरोपेली जनसंख्या जीन पारित कि फेला परेन। किनभने यो खोजन को यो पनि मानिसहरू र denisovtsami आफ्नो सभाहरूमा को ठाउँमा पुर्खाहरूको विभिन्न प्रकारका को प्रवास बाटो देखाउन कम्प्युटरमा मोडेल बनाउन सक्षम थियो।
स्वीडेन मा वैज्ञानिकहरूले कि आधुनिक मानिसहरूलाई को डीएनए संग डीएनए को परिणाम तुलना गरेर सम्भव denisovan निशान पाउन भन्छन्।
समानता denisovtsa आधुनिक मानिस संग, र Neanderthal र denisovtsa पाइने मिलान बारे रूपमा प्राप्त जानकारी को एक तुलना पछि। साथै, हामी जीन मानिसहरू Oceanic र गैर-अफ्रिकी आबादी स्वामित्वको को जीनोटाइप मा निहित denisovan कि बाहिर फेला परेन।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल मा काम
सुरुमा तिनीहरू cousins छलफल भए तापनि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल मा अनुसन्धान, denisovtsy को Neandertals भन्दा आधुनिक मानिसबाट धेरै टाढा अनुसार। यो कि Neanderthals लाग्यो र होमो Sapiens देखि उत्तिकै फरक denisovtsy थियो। तर, हार्वर्ड वैज्ञानिक दाऊदले रैह यसलाई अस्वीकार गर्न सक्षम थियो।
तर, वैज्ञानिक यो फरक प्राचीन मानिसहरू विभिन्न प्रकारका संग interbred denisovtsy भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए गर्न सकिन्छ भन्नुभयो।
जर्मन वैज्ञानिक Iogannesa Krauze को दृश्य को बिन्दु
विश्वविद्यालय Tübingen को को जर्मन आनुवांशिकता जोहानिस Krause कि असम्भव कुनै पनि मामला मा फेला टुकडे बेवास्ता गर्न ठान्नुहुन्छ। सँगै उनको सहयोगिहरु वैज्ञानिक interbreeding को निशान को उपस्थिति को लागि जीन denisovan अध्ययन संग। denisovtsa फेला दाँत प्राचीन मानिस यस प्रकारको लागि धेरै ठूलो हो भन्ने तथ्यलाई। यसलाई आफ्नो प्रत्यक्ष पुर्खा एक आदिम प्रकारको थियो जस्तो देखिन्छ।
प्रोफेसर अनुसार, राम्रो मान्छे को पुरानो संस्करण संग interbred denisovtsy एक संस्करण हुन सक्छ दाँत को विलक्षणता व्याख्या गर्न। यसबाहेक, प्रोफेसर अनुसार, सम्भवत, यो पहिले नै प्रजाति, तिनीहरूलाई को भन्दा आनुवंशिक स्तरमा अध्ययन रूपमा ज्ञात थियो।
लन्डन वैज्ञानिकहरूले भन्न?
बेलायत मा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को लन्डन शोधकर्ता क्रिस Stringer को कि भन्ने विश्वास गर्छ हाइडेलबर्ग मानिस, युरोप र पश्चिमी एशिया बसोबास, यो एउटा ठूलो पार गर्न नेतृत्व जो, पूरा denisovan सकेन। यो एक उत्कृष्ट विकल्प सकेनन् छ एक मानिस हुन यो धेरै क्षेत्रमा सामान्य थियो, erectus र denisovtsami संग पूरा गर्न सकेन।
निस्सन्देह, तपाईंले यी सबै प्रजातिका पारंपरिक डीएनए विश्लेषण को माध्यम द्वारा यी विवाद समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो किनभने तिनीहरू केवल बाँच्न थिएन, सम्भव छैन। सबैभन्दा Homininae तातो वातावरणमा dwelled, तर किनभने जीनोम आफ्नो रहलपहल संरक्षित छैन, Neandertal denisovtsev र जो विपरीत predominantly harsher र चिसो अवस्थामा फेला परेन।
मानव प्रकृति मा क्रस-प्रजनन को भूमिका
आज को रूपमा, हामी पहिले नै प्रजाति र हाम्रा पुर्खाहरूले जो प्राचीन मान्छे, को उप धेरै थाहा छ। हामी मानव पुर्खाहरूको अफ्रीका को सरे पछि तिनीहरू अन्य प्रजाति को एक किसिम संग जोडीएको थियो भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। यसलाई केही रोचक जीनोम भविष्यमा स्थापित गरिने भएको छ।
क्षणमा हामी पहिले नै अझै अज्ञात hominin सहित स्थिर ठूलो पार, त्यहाँ छ भनेर थाह छ। जस्तै धेरै वैज्ञानिकहरूले भन्न चासो अन्य प्रकारका बारेमा 7,00,000 वर्ष पहिले उठ्दा।
अध्ययन आधारित, हामी भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं केही समयमा मानिसको विकास क्रममा एक जो denisovan गर्न पछि नेतृत्व र अन्य होमो Sapiens र Neanderthal मानिस बढि पुरातन पुर्खाहरूको आए धेरै रेखा, विभाजन गरिएको छ। साथै, वैज्ञानिकहरू Neanderthals denisovtsy र अन्य होमो Sapiens केही समय Altai रहते र प्रत्येक अन्य संग पार भनेर फेला परेन। साथै, पार भनेर विभिन्न समयमा र विभिन्न क्षेत्रहरूमा denisovtsam भेट अन्य प्रजातिका भयो।
यसलाई अन्यथा जडान थप स्पष्ट ठेगाना लगाया जान सक्छ, पुरातन मान्छे को अन्य प्रजातिहरु को डीएनए बाँच्न थिएन कि धिक्कार छ। तथापि, मानिसको आधुनिक विज्ञान अझै पनि खडा गर्दैन, र सायद चाँडै हामी हाम्रो मूल बारे केही नयाँ सिक्न हुनेछ।
आधुनिक पश्चिमी समाजशास्त्र
राज्य को आकार। अवधारणा। को विशेषताहरु
महिला लैंगिक अंगहरु: मुख्य घटक को शरीर रचनाको विज्ञान
जो राम्रो छ - बोडरम वा Marmaris? कसरी चयन गर्ने?
किन केक को सपना: सपना पुस्तक। के सपना केक
हृदय कसरी दुख्छ? आफ्नो डाक्टर सोध्नुहोस्
आफ्नो हातले plasterboard को सरल छत
कसरी सीएस मा एक सानो दृष्टि गर्न गाइड: GO